Akwụkwọ ahịhịa akpa Factory - China Akwụkwọ ahịhịa Bag Manufacturers & Suppliers
Akwụkwọ Straw obere akpa Eco-enyi na enyi Natural Agba Mee Up ịchọ mma Ọhazi
Ihe eji eme ihe bu ihe edozi ma di nma, i nwere ike inwe mmuta nke ihe anyi choro di elu ma na-emesighachi obi obi ike. - ejirila ihe eji eme enyi eme ihe n'ọtụtụ ebe.
Eco-friendly ịchọ mma Bag Ọhazi mkpọchi mkpọchi na Tassel Puller
Shapedị ahụ adịghị oke nke na ọ dị mfe iburu na nchekwa. Na mgbakwunye, ọ mara mma na pụrụ iche maka unisex iji. The dum akpa bụ eke na izute "gburugburu ebe obibi enyi na enyi" chọrọ.This akpa bụ T-udi nke bụ otu ebe.